Umenyiwe ephathini yelusuku lwekutalwa. Ngezandla esingenalutho ukuze izivakashi ungahambi. Futhi niyazi iqhawe kahle okwanele lolo suku ukukhetha isipho ngenxa yendlela. Mhlawumbe wena umane akudingeki isikhathi ukuthenga okuthile ofanele. Noma lokuzalwa kudala yasungulwa yena isipho, futhi nguwe ngeke kuphela ukutshalwa kwezimali ekusebenziseni ngamaphupho akhe. Ngokuvamile, kunezimo eziningi lapho isimo sikuvumela ukuba anike imali yakhe lokuzalwa, hhayi ukugijimela izitolo siyofuna esinye izinto ezingadingekile, okuyinto ziyolibaleka ngokushesha emva iholidi.
- Njengoba kuyinto isidina - nje ukunikeza imali - uzokutshela emhlabeni.
- Futhi lapha nalaphaya - singasho ephendula.
Kufanele wengeze nje kancane endabeni yokubhalisa isipho ngokuqinile impahla, futhi wenze isimanga omkhulu enganeni lokuzalwa. Ukuze nginikele ngemali i lokuzalwa yokuqala akanayo ukuba mkhulu noma engumphangi Umjabulisi. Nje elula kancane umcabango. Kodwa uma kuwukuthi izinto eziqanjiwe sesiqhubeke isikhathi sokuphumula, umane sebenzisa okukodwa kokukhethwa kukho ngomumo eyenziwe ukuthi sinikela ukunakwa kwakho.
Indlela elula ukunikeza imali ungqo lokuzalwa kuka ukuze ubafake imvilophu, okwamanje yasungulwa. Hhayi qwa, okuyinto efanelekayo kuphela ukufumbathisa, kodwa hhayi banal ikhadi imvilophu izimbali, noma umfanekiso eyiphepha. Yenza imvilophu ezandleni zakho. Ngenxa yalesi isiqephu ewusizo amakhadibhodi (kuwo senza izisekelo), umagazini yamaphephandaba amahle, kuze kudabuke umhlane ahlukahlukene, sequins, amathawula nokuningi. Ngosizo glue sikelo, ungakha ikholaji ephelele, ikakhulukazi uma isithombe umagazini uzobe bahlanganiswe indaba ephathwayo, isihloko ungachithi lokuzalwa. Uma wazi ukuthi umnikazi efuna sethabe uhambo, ukunikeza uhlobo imvilophi ithikithi noma iholide iphakethe. Ungakwazi nje wenze umbhalo oqoshiwe ezihlekisayo ngalokho ncamashi yinani amanga ngaphakathi.
Nazi ezimbalwa ongakhetha kanjani ukuba nginikele ngemali i lokuzalwa yokuqala. Ungasebenzisa amanothi, ukuvula kuwo kunoma iyiphi sibalo isitayela origami noma lokuqoqa in a esihlahleni imali. Manje amakhekhe zithandwa kakhulu futhi sezimbali izinto ezihlukahlukene, njenge-candy noma namanabukeni (njengesipho ekuzalweni ingane), imali yamaphepha lungasetshenziswa njengesisekelo ukuhlobisa noma into efana naleyo.
Ungakwazi banikele isheke lokuzalwa ethile ebhange, bese ngikweluleke athula khona i- "ibhange" kuye. Okuningi ngokunembile, hhayi ebhange, futhi ingilazi nembiza encane, okuyinto iphuma izikweletu zabo abazazisayo. Uma le ndlela ibonakala eziyinkimbinkimbi kakhulu, ukunikeza imali ebhange. A usongwa ku umqulu izikweletu kungenziwa efakwa icala usikilidi, isipho kufanelekile owesilisa ababhemayo. Nanti elinye icebiso ukunikeza imali lokuzalwa yokuqala, futhi, kuyafaneleka ngaphezulu ukuba kuvakashe ummeleli wendlunkulu wobulili namandla. Uncork ibhodlela notshwala bafakwa imali engamaphepha, iphuma ibe tube futhi hermetically phama esikhwameni esobala. Zama ngobumnene ukubuyela ipulaki. Ukuze uthole kuze kube manje, abe isiphuzo isiphuzo, nesikhathi ungcono iqembu iholide, abatholi.
Njengoba sesibonile, kungenzeka ukuba uqaphele eziningi amacebiso okuthi ungazuza kanjani ukuba nginikele ngemali i lokuzalwa yokuqala. Sebenzisa omunye wabo ukusingatha imikhosi nje kuphela ngokuchitha isipho sakho, kodwa futhi ku kwezidingo zayo.
Indlela yokuvuza umshanelo wokugeza: isinyathelo ngesinyathelo imfundo